Tag: outbound ahịa | Martech Zone
Tag: outbound ahịa
Zaghachi: Gbanwee Aka Gị Ahịa na LinkedIn Email Search na Outreach
Tọzdee, Nọvemba 5, 2020 Tọzdee, Nọvemba 5, 2020 Douglas Karr
Ọ dịghị onye ga-arụ ụka na LinkedIn bụ usoro mmekọrịta mmekọrịta zuru oke nke azụmahịa na mbara ala. N'ezie, eleghị m anya mmalite agbakwunyere maka nwa akwukwo ma ọ bụ melite mmalite nke m n'ime afọ iri kemgbe eji LinkedIn. Ọ bụghị naanị na LinkedIn na-enye m ohere ịhụ ihe niile ịmalitegharị na-eme, mana enwere m ike ịchọpụta netwọọdụ nwa akwukwo ahụ wee hụ onye ha na ya rụkọtara na maka - wee kpọtụrụ ndị ahụ ka ị chọpụta
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-agụ blọgụ m ogologo oge, ị maara na okwu a na-eziga m na iwe iwe. Ndị folks karịrị SoftwareAdvice zigara otu isiokwu zuru ezu, Inbound vs Outbound Marketing: A Primer for Newbies or Switchers. Onye ndu ahụ na-arụ ọrụ dị oke mma nke ịgagharị na atụmatụ, esemokwu dị iche iche, yana ngwaọrụ nke atụmatụ inbound na atụmatụ ọpụpụ. Ọ bara uru ịgụ ya nke mere gaa lelee ya.
SBA na-eme atụmatụ na a na-etinye ụlọ ọrụ azụmaahịa ọhụrụ 600,000 kwa afọ. Ọ bụghị ọtụtụ n’ime ha na-erite uru site na aha akara dịka IBM ma ọ bụ Coca Cola. Iji lanarị, ha ga-achụ nta maka azụmahịa ọhụrụ. Ọbụna nnukwu ụlọ ọrụ dịka EMC, Cisco na Hewlett Packard nwere nnukwu ìgwè raara onwe ha nye maka ịchọta azụmaahịa ọhụrụ na ntọala ha arụnyere yana ndị ahịa ọhụụ. Enweghị usoro maka atụmanya na mmụba metụtara ya